Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » WOWU! I-BMW 8 Series Gran Coupe uHlelo olukhethekileyo
I-BMW 8 Series Gran Coupe iyakuthengiswa kushicilelo olunqunyelweyo emva kwenkulumbuso yehlabathi eFrieze Los Angeles ngoFebruwari 2022. Ngo-2010, igcisa laseMelika sele lenze iBMW M3 GT2 Art Car eyadlala iiyure ezingama-24 zeLe. Uhlanga lwamadoda.
UJeff Koons, kunye no-Oliver Zipse, uSihlalo weBhodi yoLawulo, i-BMW AG, ubhengeze namhlanje ukuba igcisa liza kwenza ushicilelo olukhethekileyo lweM850i ​​xDrive Gran Coupe.
I-8 Series Gran Coupe iyakuthengiswa kushicilelo olunqunyelweyo emva kwenkulumbuso yehlabathi eFrieze Los Angeles ngoFebruwari 2022. Ngo-2010, igcisa laseMelika sele lenze iBMW M3 GT2 Art Car eyadlala iiyure ezingama-24 zeLe Mans. ubuhlanga.
UJeff Koons: "Ndonwabile kwaye ndiwongekile ngethuba lokuphinda ndisebenzisane neBMW kwakhona nokwenza imoto ekhethekileyo."
Okwangoku iimoto zenziwa ngokufihlakeleyo kwiBMW Group Plant eDingolfing, eBavaria. Ngexesha lomsitho okhethekileyo ePinakothek der Moderne kwiintsuku ezimbalwa phambi kokuvulwa kwe-IAA MOBILITY 2021, amagqabantshintshi okuqala kunye neenkcukacha zokuvala zityhilwe.
I-8 X JEFF KOONS yindlela echanekileyo, ecokisekileyo kunye nobugcisa, ngepeyinti eyahlukeneyo ethatha iiyure ezingama-285 ukufaka kwimoto nganye. Uyilo olucacisayo kunye nolothusayo ludibanisa imibala elishumi elinanye eyahlukeneyo yangaphandle evela kwibala elihlaza okwesibhakabhaka kunye nakwisilivere kunye nokumthubi nokumnyama. Zimbini kuphela iimoto eziya kwenziwa veki nganye. Indawo yangaphakathi enemibala emininzi inezixhobo ezisemgangathweni ophezulu, isikhumba esihle kunye nesiciko sekhabhathi esinebheji yoshicilelo kunye nomsayino womzobi. Izihlalo zenziwe ngombala obomvu nohlaza okwesibhakabhaka weyunithi yenkampani ephezulu yokusebenza iBMW M. Uyilo lubandakanya zombini izinto zobugcisa be pop kunye neepateni zejiyometri zinika imbeko kuluhlu lwe-8 Series Gran Coupe kunye nemilo.
Imicimbi yeNkampani ye-BMW neMicimbi kaRhulumente